Baker-Olimpico la solay mesh dalool Dambiisha - Shiinaha Baker-Olimpico la solay mesh dalool Basket-qeybiye,-SHQD Factory
Baker-Olimpico dambiisha solay mesh la nooc kasta oo solay lagu dubo shaqeeya - Weber, Charbroil, Egg Green Big, caba, dhuxusha, propane, gaaska, ama korontada. U suurto gal ah in cuntooyinka solay in mar walba ay adag tahay ama xitaa aan macquul ahayn si loo kariyo on a dubo, sida kalluunka, browns hash, hilib doofaar, ukunta, canjeelada, khudaarta cut, haley, scallops iyo si ka sii badan. Better badan digsiga dabkaan kasta ama dambiisha, our derin waa laga gooyn karaa in ay size kasta ama qaabka ku haboon baahida loo qabo wax.
Baker-Olimpico dambiilood solay mesh waxaa dahaarka leh kula PTFE, taas oo ah mid aad u macaan oo aan dheg inay cuntada. warqada saliid dhaqanka Bedel. 100% Non-ul ka dhigan tahay in aad solay aan dufan iyo dermaha waa karaa isticmaali karo muddo sanado ah!isticmaali karo, si fudud loo nadiifin iyo dhaqa ammaan
Baker-Olimpico dambiisha solay mesh waxaa laga sameeyay 100% qalabka PFOA-Free iyo premium PTFE-Maro adag daahan, ma PFOA ama kiimikooyinka kale ee khatarta ah! Shahaado sidii ammaan ah by FDA ansixiyay.